Muxaadarooyinka Dr. Bulxan waa u halis qaddiyadda Somaliland Qalinkii: Maxamed Axmed Dallaayo | Togdheer News Network
Muxaadarooyinka Dr. Bulxan waa u halis qaddiyadda Somaliland Qalinkii: Maxamed Axmed Dallaayo
War yaab leh oo maanta na soo gaadhay ayaa sheegaya in Dr Bulxan oo ka mid ah aqoon yahanka Somaliland uu tabliiq siyaasadeed u tagi doono Muqdisho halkaana uu dadweynaha reer Muqdisho u dhigi doono casharo ku saabsan Somaliland iyo waayaheeda siyaasadeed. Waa wax lagu qoslo.
Qadiyada Somaliland ma cid ay ka qarsoon tahay baa jirta. Ma qof Muqdisho joogo oo aan maanta ogayn halka ay Somaliland taagan tahay ayaa jira. Muxuu soo kordhin karaa nin kaligii shandad sita oo hudheelada Muqdisho kolba caruur iyo dumar ay sacab u tumaan. Somaliland se ma u baahan tahay in ay qadiyadeeda siyaasiga ah u bedesho mid bulsho. Miyaanay hankeena iyo xukuumada aan dooranay ee ina metesho labadaba sharaf dhac ku ahayn.
Somaliland qadiyadeedu waxay haysaa jid quman oo siyaasi ah. Waxay wada hadalo la bilawday Soomaaliya. In kastoo wada hadaladaas ay Soomaaliya ka caga jiidayso Somaliland waa in ay ku adkaysataa ka midho dhalinteeda. Looma baahna in qadiyadeena lagu tuuro salaanka halka ugu hoosaysa oo ah waxa loogu yeedho ururada bulshada, aqoonyahanka iyo odayaasha dhaqanka. Bulshada rayidka ah ee la sheegayaa waa halka loo soo maro wadamada la baabiinayo.
Talaabadan uu Dr Bulxan la yimi waxay isu eg yihiin mashruucii Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa is dhexgalka bulshada. Muqdisho waxay doonaysaa in ay maalin dhaw aduunka ku tidhaa kuwa kala goosashada aaminsan way ka khudbeeyaan Muqdisho anaguna Hargeysa aan ka khudbayno. Waa talaabo aan ka fiirsi lahayn. Waxan loogu yeedho is dhex galka bulshadu waa wax Soomaaliya guul u ah Somaliland na hadimo mooyee aan khayr u lahayn. Somaliland ahaan waxaan guul ku gaadhaynaa in aan is ururino oo afka jabino cidii khadkeena cas ka soo talawda.
Dawladda Somaliland waxaan u soo jeedinayaa in ay Dr. Bulxan u caqli caliso oo arinka ka joojiso isaga iyo hadii ay jiraan cid kale oo kula jirtaa, dhaqdhaqaaqyada noocan ahna aan haba yaraatee loo dul qaadan. Hadii kale waxan u fahmaynaa in xukuumadu la og tahay, wixii ka soo baxana masuuliyadeeda leedahay. Waar hoy Somaliland qadiyadeedu ka weyn wax nin kali ahi la wareego ee yaan shacabka la qaldin.
Maxamed Axmed Dallaayo